ALATSINAINY 23 SEPTAMBRA 2019
FIHAONANA TAMIN-DRAJOELINA TENY AMIN’NY CCI IVATO : Nohazavaina tamin’ny antsipiriany ireo fampanantenany sy Velirano 13
Asa fa tsy kabary. Efa mipetrapetraka avokoa ny lamina rehetra hitondran’ny Kandidà Andry Rajoelina ny fampandrosoana an’i Madagasikara ao anatin’ny fotoana fohy. 2 novembre 2018
Na ny famatsiam-bola hoentiny hanatanterahana izany aza dia efa vonona tanteraka, misy amin’ireo fampanantenana no tsy miandry ny fahatongavan’ny eo amin’ny toeran’ny Filoham-pirenena akory dia efa raikitra avy hatrany. Omaly, nampahafantariny tamin’ny fomba ofisialy ireo vinan’asany, izay voafaritra ao anatin’ny IEM, hitondrana fampandrosoana eo amin’ny sehatra ara-tsosialy sy ara-ekonomika ho an’ny vahoaka Malagasy.
Namerina ny fanantenan’ny vahoaka Malagasy izay efa latsaka anaty haizina tanteraka ilay fotoan-dehibe niarahana tamin’ny Kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13, teny amin’ny Ivon-toerana fandraisana fivoriana iraisam-pirenena na CCI Ivato, omaly nanomboka tamin’ny roa ora tolak’andro. Efa nisy hatrany ny fampahafantarany mivantana an’ireo tetikasam-pampandrosoana hoentiny hanavotana ny firenena nandritra ny fampielezan-kevitra nataony saingy omaly no nanazavany izany tamin’ny antsipiriany. Tamin’io fotoana io ihany koa no noentiny nitondrana fanazavana bebe kokoa ny fomba hanatanterahany ireo vinam-pampandrosoana marobe ho an’i Madagasikara sy ny famatsiam-bola hoentiny manatanteraka izany.
Ireo lafim-pampandrosoana tena maharary ny vahoaka ankehitriny no hitondrany vahaolana ao anatin’ny fotoana fohy.
Tafiditra ao anatin’izany ny lafiny ara-tsosialy mahasahana ny fanabeazana, ny fitondrana hazavana ho an’ny isan-tokantrano amin’ny alalan’ny angovo azo havaozina, ny ady hatao amin’ny halatr’omby sy ny tsy fandriam-pahalemana, fampananana trano fonenana tsara ho an’ny daholobe ary ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka. Novelabelarin’ny Kandidà n°13 tamin’ny omaly io ihany koa ireo tetikasa ara-toera-karena hanarenana an’i Madagasikara, tafiditra ao anatin’izany ny fanomezana asa ho an’ny tanora, fampiroboroboana ny lafiny fizahantany, fampiroboroboana ny indostria manerana ny Nosy, fananganana banky eto an-toerana sy ho an’ny Malagasy ary ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany. Fanamby lehibe no nataon’ny kandidà Andry Rajoelina fa tsy maintsy mandroso i Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy, araka ny voasoratra ao anatin’ny Veliranom-pampandrosoana voafaritra ao anatin’ireo teboka miisa 13 lehibe ao anatin’ny IEM.
Efa misy tonga ireo fitaovana hiadiana amin’ny dahalo
Tato anatin’ny taona maro nifandimby izay dia tena nirongatra izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny Nosy. Mahazo vahana ny halatr’omby sy ny asan-dahalo miharo vono olona feno habibiana, izay tena nampikaikaika ny vahoaka indrindra fa ny any ambanivohitra. “Tsy maintsy fongorina ny asan-dahalo”, hoy ny kandidà Andry Rajoelina. Efa matipaika sy tsara lamina ny fomba hoentiny hiadiana amin’ny asan-dahalo sy ny halatr’omby ary ny hamongorana izany hatramin’ny fakany.
Tsy misy handeferana intsony ireo mpanao ratsy fa ny dahalo sy ny mpiray tsikombakomba aminy izay tratra, avy hatrany hatrany dia iharan’ny sazy henjana ary alefa sesitany any Anosilava. Tsy hanavahana io fa na hatramin’ireo mpandray omby halatra aza dia hiharan’ny sazy henjana avokoa. Hatramin’izay dia tsizarizary ny fitaovana nampiasain’ireo mpitandro filaminana, hany ka hifaninanan’ireo dahalo mihitsy. Fanamby lehibe no napetraky ny kandidà Andry Rajoelina fa hovatsiana fitaovana raitra sy avo lenta ireo mpitandro filaminana mba hahafahana manatratra ao anatin’ny fotoana fohy ireo mpanao ratsy. Hisy ny fividianana angidim-by hanenjehana dahalo, ny fampiasana “drones” ary fampiasana fiara tsy mataho-dalana tena mahazaka lalan-dratsy.
Nambaran’ny Kandidà n°13 fa na mbola tsy tonga eo amin’ny toeran’ny filoham-pirenena aza ny tenany dia efa mandeha ny ezaka rehetra hoentiny hanafoanana izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay. Voalazany fa efa tonga eto an-toerana ireo “drones”, izay efa eny am-pelatanan’ny zandarimariam-pirenena. Efa an- dalam- pahatongavana eto Madagasikara ihany koa ireo fiara tsy mataho-dalana, afaka telo herinandro eo ho eo dia hatolotra ny mpitandro filaminana. Ady hatao amin’izay tsy fandriam-pahalemana izay ihany koa ny fametrahana hery vonjy taitra manokana hamaly vonjy ny vahoaka ao anatin’ny 30 minitra. Hentitra ny kandidà Andry Rajoelina raha nilaza fa izay tompon’andraikitra tsy mahavita ny asany ao anatin’izay dia hosoloina tsy misy hatak’andro. Harovana tahaka izany ihany koa ny sisin-dranomasina amin’ny alalan’ny fampiasana ny “drônes”.
Nandritra ireo fitsidiham-paritra nataony nandritra ny praopagandy, indrindra fa tany amin’ireo toerana voasokajy ho faritra mena amin’ny halatr’omby no nilazany fa hasiana “puce” ny omby mba hahafahana mamantatra izay toerana misy azy raha sendra misy ny halatr’omby mitranga. Omaly naverina nohazavaina tsara ny mahakasika io vinan’asany io, rehefa apetraka amin’ny omby ilay “puce” kely dia hita amin’ny alalan’ny satelita na zana-bolana ny toerana misy azy. Samy asiana “puce” manokana avy ny omby tsirairay ary avy hatrany dia fantatra amin’ny alalan’ izay ihany koa ny mombamomba azy rehetra. Hofoanana ihany koa ny fanondranana omby, hoy izy. Hasiana toeram-pakàna aina isaky ny 100 km eny amin’ireo lalàm-pirenena hiadiana amin’ny fanakanan-dalàna ataon’ireo dahalo.
Hohatsaraina ny fanabeazana
Ny tanora no ho avin’ny firenena. Hatramin’izay no efa nametraka ho laharam-pahamehana ny tontolon’ny fanabeazana ny kandidà Andry Rajoelina. Tafiditra ao anatin’ilay Vinam-pampandrosoana hoentiny ny hanatsarana ny lafiny fanabeazana mba hananganana ho olom-banona na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy ny zaza malagasy. Ao anatin’izany ny fampanantenana ataony amin’ny fananganana sekoly manara-penitra mba hianatra ao anatina fotodrafitrasa mendrika ny kilonga madinika. Isaky ny ambaratongam-pampianarana dia mihena an-daharana hatrany ny isan’ireo zaza miditra an-tsekoly, manginy fotsiny ny tsy fahafahan’ireo oniverisitem-panjakana mandray mpianatra betsaka.
Eo anatrehan’izany dia nametraka paikady vaovao ny kandidà Andry Rajoelina fa hisy ny fampiofanana ny tanora afaka bakalorea ao anatin’ny enim-bolana na herintaona, ka rehefa mahazo fiofanana izy ireo dia handray an-tanana ny fampianarana ireo zaza Malagasy any amin’ny ambaratonga fototra indray. Hamafisina ny fampianarana ny fahaiza-miaina na ny “Education civique” mba hanana taranaka mahay miaina sy mahalala fomba i Madagasikara. Tsy ho diso anjara ao anatin’izany ihany koa ny fanabeazana eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahan-tena. Nilaza ny Kandidà n°13 fa hanangana toeram-panofanana ara-panatanjahan-tena ho an’ny tanora mba hanana ny maha izy azy eo amin’ny lafiny fanatanjahantena i Madagasikara, ka hanana tompon-daka amin’ny sehatra maro i Madagasikara.
Hitondra hazavana isan-tokantrano
Nampikaikaika ny mponina tamina faritra maro manerana ny Nosy ny trangana delestazy. Nisy mihitsy aza ny hetsi-bahoaka noentina nanoherana izany. Anisan’ireo vinan’asa matipaika hoentin’ny kandidà Andry Rajoelina ny hamahana ny olan’ny fahatapahan-jiro amin’ny alalan’ny fametrahana angovo azo havaozina mandeha amin’ny herin’ny masoandro isaky ny Faritra sy ny Distrika. Nambaran’ny kandidà Andry Rajoelina fa hatramin’izay dia tsy nisy afa-tsy 400MW fotsiny ny herinaratra novokarina teto Madagasikara. Vokatr’izany zara raha nisy ny 15%n’ny vahoaka malagasy no mahazo herinaratra.
Velirano no nataony fa ao anatin’ny herintaona dia hiakatra avo roa heny io ka hahatratra hatrany amin’ny 1000MW mba hahafahan’ny vahoaka malagasy misitraka herinaratra isan-tokantrano. Hatsangana eto Madagasikara ihany koa ny orinasa mpamokatra takelaka fakana herin’ny masoandro na “panneau solaire”.
Hampiakarina ny lafiny ara-toe-karena
Nandritra ny fampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy ireo Vinan’asa noentin’ny Kandidà Andry Rajoelina omaly, dia nambarany mazava tsara fa hohatsaraina ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara. Ireo zavatra rehetra ilain’ny vahoaka malagasy dia ezahina ny hamokarana azy eto an-toerana ihany. Fampandrosoana goavana miaraka amin’ny fananganana ireo fotodrafitrasa mifandraika amin’izay no fanamby lehibe nomeny ny vahoaka malagasy. Nambarany fa hisy ny fananganana orinasa mpanamboatra fiara mba hahafahan’ny Malagasy manana fiara, izay ho amin’ny vidiny sahaza ny rehetra. Hampitomboina ny volamena haondran’i Madagasikara, hampitomboina ireo vokatra fanondrana mankany ivelany. Hampiroboroboana ny lafiny fizahan-tany, ka hisy ny fananganana ireo trano fandraisam-bahiny lehibe manerana ny renivohi-paritany miisa enina eto Madagasikara. Ireto farany dia toerana anisany mahasarika mpizaha tany betsaka indrindra.
Miroso ny dia
Matotra tanteraka ireo vinam-pampandrosoana hoentin’ny Kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13. Porofo mivaingana fa tsy kisendrasendra no naha kandidà azy fa efa niomanany tao anatin’ny taona maro izany. Tonga ny fotoana hahatanterahan’ny nofinofin’ny vahoaka malagasy sy ny nofinofin’ny Kandidà Andry Rajoelina hatramin’izany. Hiitatra i Antananarivo, hatsangana ny tanàna vaovao eto Antananarivo ka hantsoina hoe i “Tanamasoandro” ho an’ny vahoakan’ Iarivo renivohitr’i Gasikara, hoy ny kandidà Andry Rajoelina.
Marihina fa tsy nohadinoiny ny nidera sy nankasitraka manokana ny kandidà Saraha Rabearisoa izay nanao fanambaràna fa hanohana ny kandidà Andry Rajoelina noho ireo vina matipaika hoentiny. “Maodely ireny, hita taratra fa efa miova ny fisainan’ny mpanao politika Malagasy”, hoy izy.
Handrangotra voasary "Pamplemousse Fc" avy atsy Maorisy ny Fosan’i Boeny KITRA (331) 17 septembre 2019 Lasan’ny jiolahy ny vola an-tapitrisany FANAFIHANA TOERAM-PISOTROANA TAO FIANARANTSOA (235) 17 septembre 2019 Raim-pianakaviana iray nodarohan’ny mpanera TSY FANAJANA NY ZON’NY MPANDEHA (131) 19 septembre 2019 Mpandraharaha iray notetitetehan’ny jiolahy, lasa ny vola 4 tapitrisa ariary AMBANJA (119) 20 septembre 2019 Mbola manohy ny asa ratsiny hatrany ANKIZY FOROCHE ETO MAHAJANGA (114) 18 septembre 2019 Manomboka tsy mitovy hevitra ireo mpikambana ANTOKO TIM (109) 18 septembre 2019